Inkonzo yethu yenze izimangaliso eziningi
I-CMO ne-API insiza yokumisa eyodwa
Ukuqanjwa ngokwezifiso nenkontileka i-R&D
I-CMOAPI inganikela ngalezi zinsizakalo ezilandelayo, zonke zixhaswa izinqubomgomo zethu eziqinile zokuvikelwa kwe-Intellectual Property (IP), ukuqinisekisa ukuthi amaphrojekthi aphathwa ngendlela eqine kakhulu yokuzethemba ngaso sonke isikhathi. I-Synt zokwenziwa komgudu wokwenziwa kwenqubo yokwenziwa kwenqubo kusuka esikhungweni kuya ku-Metric Tons Exclusivity uma kudingeka ukusekelwa okugcwele kokubandakanya kubandakanya i-HPLC, i-GC-MS kanye nensizakalo ye-NMR. imininingwane yekhasimende uqobo. Ngaphezu kwemisebenzi eshiwo ngenhla, siphinde futhi sinikeze insizakalo ekhethekile yokuhlonza izinto ezingavuthiwe (ngaphandle kwezindleko ezengeziwe) ukuqinisekisa ukuthi, lapho kungenzeka khona, sisebenzisa kuphela imithombo yezinto ezisezingeni eliphakeme ngamanani emakethe ancintisanayo. I-CMOAPI iyakwazi nokuhlinzeka ngezinsizakalo zocwaningo nentuthuko ehambelana nezidingo ezithile zamakhasimende. Sinerekhodi elihle kakhulu lokuxazulula izinselelo eziyinkimbinkimbi ze-organic synthesis kumakhasimende ethu futhi amaphrojekthi angasuselwa kufana nesikhathi esigcwele (FTE) noma amanani nsuku zonke. Xhumana nathi ukuthola ukuthi iqembu lethu le-R & D elinamakhono amakhulu lingenza kanjani iphrojekthi yakho elandelayo impumelelo yethu yakamuva.
Ukuqanjwa kwamanani amancane nezinkulu
Eminyakeni eyishumi edlule, i-CMOAPI ibinikela ngezinsizakalo ezijwayelekile zokuqamba kanye nezinsiza zokwenziwa. Izinga lethu lensizakalo lingahluka ukusuka ebuntshini elincane le-milligram liye kumathani wezinsizakalo zokukhiqiza ezinkulu. Iningi lamaklayenti ethu atholakala eNyakatho Melika, e-Europe, e-Aisa, kufaka phakathi i-Pfizer, i-lilly, i-roche, i-GSK, i-MSD, i-bayer kanye nezinye izinkampani ezidumile. Yonke insizakalo yethu yokwenza nokwenziwa ngokwezifiso kwenziwa ngaphansi kwemibandela yokugcinwa kwemfihlo eqinile. Amaqembu wethu wephrojekthi ehlanganisiwe asekelwa yiqembu elinolwazi kakhulu futhi elizinikele losokhemisi abasezingeni eliphakeme. Isebenza ngokuphendula ngezinto ezinobubanzi bokushisa kusuka ku-100C, kuze kufike ku-300˚C, nezikali ezisukela ku-5L kuye ku-5000L, inani linikezwa kumakhasimende ngokuqanjwa kahle kwangaphakathi kwendlu kokuqanjwa kweprojekthi yokhiye (kufika ku-metric ton wingi) futhi kuyasebenza zezithako zemithi. Ezokukhiqiza zenziwa esakhiweni sethu esakhiwe ngokuphelele. Senza ngokwezifiso uchungechunge lokunikezela ngamakhemikhali wokukhiqiza ukuze uhlangabezane nokulethwa kwephrojekthi yakho ethile ngejubane elikhulu nezindleko ngenkathi uhlangabezana namazinga aphakeme kakhulu wokuphepha nokuhambisana okuhambisana nomthetho. Izinqubo zokukhiqiza ezenziwe zivumela usayizi we-batch oguquguqukayo nekhwalithi yomkhiqizo ethuthukisiwe. Zonke izinqubo zenzelwe ukufeza amazinga aqinile wokulawula.
I-CMOAPI for Drug Discovery iyisisombululo esisekelwa amafu, esibonisa ukuhlaziya ulwazi lwesayensi kanye nemininingwane yokwambula ukuxhumana okukhona nokufihliwe okungasiza ukwandisa amathuba okuvela kwesayensi. Ipulatifomu ivumela abacwaningi ukuthi bakhiqize ama-hypotheses amasha ngosizo lwe-visual visualization, ukubikezela okusekelwa ubufakazi kanye nokusebenza kwezilimi zemvelo okuqeqeshelwe isizinda sempilo yempilo. I-CMOAPI Yokutholwa Kwezidakamizwa ingasheshisa ukukhonjwa kwabavoti bezidakamizwa kanye nezinjongo zokuthola izidakamizwa zenoveli ngokubopha amandla wedatha enkulu.
Inqubo R&D nokuthuthukiswa komzila omusha
Iqembu lethu lokuthuthukisa amakhemikhali, elakhiwa ososayensi abangaphezu kwama-50 emazweni ethu, lidlula okulindelwe ngisho nakumaphrojekthi anselele kakhulu. Sisebenza ezindaweni zokusebenzela ezisezingeni eliphezulu ezifakwe inqubo yakamuva kanye nokufakwa kwezinto zokuhlaziya, senza ngempumelelo ukuhlolwa komzila, ukuthuthukiswa kwenqubo okusheshayo, ukwenziwa kwezimo zokuphendula kwesilinganiso sezinto zokwenziwa zokuvivinya kwangaphambi kokukhiqiza noma ezinkulu. Ngokusekelwa yithimba lethu lochwepheshe labahlaziyi, onjiniyela bamakhemikhali kanye nabasebenza nge-QA, ngokushesha sithuthukisa izinqubo zokukhiqiza ezinobungozi ukuhlangabezana nanoma yisiphi isidingo sakho.
IJINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED
No.27 Keyuan Street, Isifunda Sokuthuthukiswa Komnotho, I-Shanghe County, Idolobha laseJinan, Isifundazwe SaseShandong
sicela uthinte ku [i-imeyili ivikelwe]
© 2020 cmoapi.com. Wonke Amalungelo Agodliwe. Ukuzikhulula: Asenzi izimangalo ngemikhiqizo ethengiswa kule webhusayithi. Alukho ulwazi olunikezwe kule webhusayithi oluye lwahlolwa yi-FDA noma i-MHRA. Noma yiluphi ulwazi olunikezwe kule webhusayithi lunikezwa ngokwazi kwethu futhi akuhloselwe ukufaka izeluleko zikadokotela oqeqeshiwe. Noma ibuphi ubufakazi noma ukubuyekezwa komkhiqizo okunikezwe amakhasimende ethu akuyona imibono ye-cmoapi.com futhi akufanele kuthathwe njengezincomo noma iqiniso.